Google ebipụta nche patches idozi 36 njehie na Android | Gam akporosis
Nsogbu a na koodu ogbugbu a nwere ikike dị elu nke "mebiri" nchekwa nke ngwaọrụ anyị. Taa anyị amatala nke ahụ Google edozila ụfọdụ n'ime nsogbu ndị ahụ.
Ha weputara ihe nche nke na edozi otutu chinchi nche, ma e nwere ndị abụọ dị mkpa, ebe ha kwere ka hackers igbu obi koodu dị ka malware na ndị ùgwù na sistemụ faịlụ.
N'okwu ndị ahụ ebe egburu malware ahụ, ha nwere ikike dị elu iji nwee ike "ịgagharị" na sistemụ. N'ezie, n'ihi ahụhụ ndị ahụ edozi, ma dị na sistemụ gam akporo, ha nwere ike ịkpalite nnyefe ahaziri iche iji rụọ koodu na-enweghị isi na ọnọdụ nke usoro ọrụ ndị ahụ.
Na mkpokọta Google bipụtara patches maka opekata mpe 35 nchekwa, agbanyeghị na ụfọdụ nsogbu ndị a nọ naanị na ngwaọrụ sitere n'aka onye nrụpụta Qualcomm.
Ma lee anyị ga mkpa ịnata mmelite kwa ọnwa site n'aka onye nrụpụta iji nwee akara nche nche ọhụrụ na gam akporo. Ọ bụghị ụdị niile na-emesi ike dị mkpa na nke a.
N'ime nsogbu ndị a niile, ndị Google kpọrọ nkatọ na akwụkwọ akụkọ Jenụwarị nke Google bụ ndị dị mkpa edepụtara dị ka CVE-2020-0117 na CVE-2020-8597. Ha bụ otu n'ime nsogbu anọ dị na sistemụ gam akporo. Nsogbu dị egwu bi na nsụgharị Android 8 site na 11 kachasị ọhụrụ.
Nsogbu ndị a nwere ike -eji site na email, ihe nchọgharị weebụ na MMS mgbe a na-arụ ọrụ faịlụ mgbasa ozi. Ma ọ dabere n'ihe ùgwù ndị metụtara ngwa ahụ, onye na-awakpo ya nwere ike ịwụnye mmemme; lee, gbanwee ma ọ bụ hichapụ data; ma ọ bụ mepụta akaụntụ ọhụrụ na ikike onye ọrụ niile.
Yabụ ọ bụrụ na inwere ohere melite mkpanaka gi na ihe ohuru nke Google June, egbula oge ime ya iji dozie nsogbu ndị ahụ nke sistemu gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-edozi flaws nchedo gam akporo abụọ kachasị mkpa nke nyere ikike igbu koodu
Etu esi mara ole ngwaọrụ ejikọtara na akaụntụ Google m